Dhammaan Qorshayaasha Medicare
Kharash yar, Dabool badan
CHPW Medicare Advantage qorshayaasha caafimaadka waxay bixiyaan faa'iidooyin badan, oo leh khidmadaha ugu hooseeya $0.
Daboolista Tijaabada COVID-19DAAWO cusboonaysiinta
Diyaar u ah, deji, dabacsan!
CHPW waxay iskaashi la leedahay Silver & Fit si aad jimicsi joogto ah uga dhigto mid fudud oo madadaalo leh. Dhammaan xubnaha Medicare Advantage waxay u qalmaan xubinnimada jimicsiga bilaashka ah, koorsooyinka jimicsiga guriga, iyo Fitbit.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: May 16, 2022
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington waa qorshe HMO oo leh qandaraas Medicare. Diiwaangelinta Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington Medicare Advantage Plan waxay ku xiran tahay cusbooneysiinta qandaraaska. Si aad isaga diiwaan geliso Qorshaha Caafimaadka Beesha ee Washington Medicare Advantage, waa inaad xaq u yeelataa inaad hesho Medicare Qaybta A iyo Qaybta B oo aad ku nooshahay aagga adeegga (Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, Grays Harbor, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan, Pacific, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, iyo Yakima ee gobolka Washington). Tani ma aha sharaxaad dhamaystiran oo ku saabsan dheefaha, fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah.
Iyada oo ku saleysan qaabka dib u eegista daryeelka, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington waxaa ansixiyay Guddiga Qaranka ee Xaqiijinta Tayada (NCQA) si uu ugu shaqeeyo Qorshaha Baahiyaha Gaarka ah (SNP) illaa 2022.